Mayelana NATHI - Isikole soLimi se-BLI eCanada
UKUKHETHA KWEZINHLELO ZESIQINISO SEZONKE NEZIDINGOI-BLI inokukhetha
Ingabe ikhona indlela engcono yokufunda ulimi kunokuyiphila? I-BLI ayicabangi kanjalo. Kungaleso sizathu esenza zonke izifundo zethu zesiNgisi nezesiFulentshi zenzelwe ukufeza izidingo nezintshisakalo zabafundi bethu, futhi zenzelwe indlela eguqukayo nenokuxhumana engasizi nje kuphela ukuthi abafundi bakwazi ukukhuluma kahle futhi balwazi kahle ulimi, kepha futhi kuzobanika amathuluzi okuphumelela ezingeni lomhlaba jikelele. I-BLI yenza ulwazi lwezezilimi luhambisane nempilo yakho ezicini ezahlukahlukene ezizuzisayo ngaphezu kokucabanga kwakho. Ukwanda izinketho zakho futhi wandise impumelelo yakho yilokho sihlose.
I-BLI ithatha inqubo yokufunda ulimi ngaphandle kwasekilasini, ngokunikeza abafundi imisebenzi ehlukahlukene ejabulisayo nejabulisayo nohlelo lweKhaya Homay oluzovumela abafundi ukuthi bathathe ulwazi lwabo lokufunda kwelinye izinga, ukufunda ezweni langempela. Enye into enesipiliyoni sokufunda kwe-BLI ukulungisa kanye nokwenza ngokwezifiso izinhlelo ezizosiza abafundi ukuthi bafundele izifiso zabo, endaweni enobungane, nethuba lokuzibandakanya nabanye abafundi be-BLI abavela kuwo wonke umhlaba.
Sekuyiminyaka engaphezu kwamashumi amathathu nesithupha sisize izinkulungwane zabafundi abavela kuwo wonke umhlaba ukufezekisa amaphupho abo nokuba yizakhamizi zomhlaba. Wonke umuntu wethu, othisha be-BLI, abaphathi kanye nabaxhumanisi, babheke phambili ekwamukeleni kwesinye sezikole zethu futhi babe ngasohlangothini lwenu empilweni enhle: "ukufunda ulimi phesheya".
Sizungezwe izindawo zokudlela, izindawo zokudlela zamahhala kanye nokwakhiwa komlando